Imbeko V10: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa kuqinisekisiwe | I-Androidsis
I-Honor V10 ngoku isemthethweni: Yazi iinkcukacha zayo
El Hlonipha i-V10 yenye yeefowuni ezibambe izihloko eziphambili kwezi veki zidlulileyo. Isixhobo esitsha sefemu yaseTshayina saziswa nge-28 kaNovemba kwilizwe laso lokuzalwa. Kwiveki ephelileyo iinkcukacha zokuqala efanayo. Kodwa, isemthethweni ngokusemthethweni. Sele siyazi yonke into ngale Honor V10.
Oku bekulindelwe isixhobo sasiphezulu koluhlu, kwaye ke kube njalo. Inkcazo-ntetho yegosa elitsha lembeko ayidanisanga. Kwi umcimbi e-China iinkcukacha, amaxabiso kunye nokufumaneka kwesixhobo kutyhiliwe. Yintoni esinokuyilindela?
Este I-Honor V10 ibonelela ngamandla, uyilo olukhulu olunamaglasi asemacaleni amabini kwaye ikwafumaneka ngemibala eliqela. Ukongeza ekubeni ne-Android Oreo njengenkqubo yokusebenza. Ke ngokungathandabuzekiyo isiphelo esiphezulu esiye somelela. Ukongeza, iyenza ngexabiso eliphantsi kakhulu kunezinye iifowuni ezikweli candelo lentengiso. Sishiya wena kuqala nge Ukucaciswa kwesi sixhobo.
1 Ukucaciswa okupheleleyo kwi-V10
Ukucaciswa okupheleleyo kwi-V10
Inkqubo yokusebenza Inkqubo ye-Android 8.0. I-Oreo ene-EMUI 8 njengoluhlu lokwahlulahlula
Isikrini 5.99 intshi 2.160 × 1.080 px kunye ne-18: 9 ratio
Inkqubo I-Kirin 970 ene-NPU yobukrelekrele bokufakelwa
Ukugcinwa kwangaphakathi I-64GB / 128GB iyandiswa ukuya kuthi ga kwi-256 nge-MicroSD
Ikhamera esemva Ikhamera ezimbini ezingama-20 Mpx monochrome kunye ne-16 Mpx RGB ene-OIS enendawo yokuvula f / 1.8 kunye nokurekhodwa kwe-4K
Ikhamera yangaphambili 13 Mpx ngokuvula f / 2.0
Conectividad I-Trio: Uhlobo lwe-USB C LTE 4G WiFi Dual Band NFC kunye neBluetooth 4.2
Ibhetri I-3.750 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Ubukhulu 157 × 74.98 × 6.97 mm.
Ngokuqinisekileyo oku Hlonipha i-V10 amagqabi aneemvakalelo ezintle kakhulu. Ifemi iye yamothusa ngokuqinisekileyo ukusukela kwisixhobo Sele ine-Android Oreo. Into elindelwe kwisiphelo esiphakamileyo, kodwa kuhlala kulungile ukubona ukuba ii-brand ziyithatha ngokungathí sina.
Ngokubanzi, Siyabona ukuba ukucaciswa kwesi sixhobo kugqityiwe. Ke ngokungathandabuzekiyo kunokwenzeka ukuba ikhuphisane neyona nto iphambili kwintengiso.
El Imbeko V10 ibhengeziwe e-China. Ukuboniswa kwesixhobo eYurophu kuya kuba kwiveki ezayo. Ke kuyakufuneka silinde ukwazi ukumiliselwa kwayo kwiimarike zamanye amazwe. Okwangoku, kubo bonke abo e-China, ifowuni iya kubakho ukuthengwa ukusuka nge-5 kaDisemba.
Ukongeza, siye sakwazi ukwazi amaxabiso ezinto kwilizwe laseAsia. Njengoko ubonile kwinkcazo yayo, kukho iinguqulelo ezininzi ezikhoyo ngokuxhomekeke kwi-RAM kunye nokugcinwa kwayo. La ngamaxabiso einguqulelo ze-Honor V10:
Hlonipha i-V10 ene-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina: 344 euros to change (2699 yuan)
Hlonipha i-V10 ene-6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina: 382 euros to change (2999 yuan)
Hlonipha i-V10 ene-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina: 446 euros to change (3499 yuan)
Ukusuka kwinto oyibonayo amaxabiso abo aphantsi kakhulu kunalawo ezinye iimveliso eziphezulu kwimarike. Ngaphandle kwamathandabuzo into eya kuthi incede esi sixhobo seMbeko sithengise kakuhle. Ucinga ntoni ngale fowuni intsha ivela kwibrendi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Honor V10 ngoku isemthethweni: Yazi iinkcukacha zayo
Aesthetically intle. Ubunzima buhamba kunye. Kuya kuba yimfuneko ukubona ukuba ikhamera ihamba kakuhle na xa kusenziwa, apho nantsi eyokugqibela yeXiaomi.
Ukuphononongwa kweVernee M5
Isamsung isebenza kwiibhetri ze graphene ezinexesha elide